I-Dubai Career Iseluleko SeMakethe Wena ngokwakho e-UAE 🥇
Dubai Career izeluleko umsebenzi search izindlela nezindlela emakethe ngokwakho
I-Dubai Job WhatsApp & Recruitment
Ungawuthola kanjani umsebenzi eDubai Umhlahlandlela wokukhipha!
Kushicilelwe ngu Dubai City Inkampani at November 11, 2017
I-Dubai Career Advice search umsebenzi kanye nezindlela zemakethe ngokwakho
Dubai umsebenzi iseluleko ukusesha umsebenzi nezindlela zokuzithengisa. Yize lokhu kungaba iqiniso ku Dubai City kepha ekuthengiseni komuntu siqu kufanele ube nomhlahlandlela wokusebenza e-Dubai. Kunezindlela ezinhle zokumaketha imininingwane yakho yobungcweti yokuthola umsebenzi omusha eDubai. Ngoba inhloso yokusesha imisebenzi eDubai. Kuze kube manje, kusenezindlela eziningi ezinhle kakhulu zokumaketha kabusha kwakho UAE. Ngale nhloso eMiddle East, i Imakethe yezemisebenzi ingaba indawo yokuncintisana. Futhi ngaphandle kokulibala, isikhundla sakho sephupho singathathwa noma kunini omunye umuntu. Uma nje abaphathi bezokuqashwa babheka abazosha. Uzoba nethuba loku thola umsebenzi omusha e-UAE.
Ngaphansi kwalezo zimo, kufanele uqale ukusebenza kumkhiqizo wakho. Enye ebaluleke kakhulu kufanele wazi ngezindima zakho ezintsha ezandayo umkhiqizo wakho ngenhloso ye imisebenzi yokumaketha e-Dubai UMuzi no-Abu Dhabi. Ukwazi ukuthi ungubani kufanele kube yithagethi. Ikakhulu uma ungathanda ukushaya ukuthola umsebenzi e-Dubai City Area. Udinga ukuphatha i-CV yakho ngokuhlakanipha.
Imisebenzi e Dubai - indlela yokuthengisa emakethe okuhle kakhulu ngomsebenzi
Ukubeka ngokuhlukile njengomfanekiso we ukuba nekhono elifanele lomsebenzi. Ngokuphikisana nomsebenzi, isipiliyoni asihlali njalo okwanele ukukuthola umsebenzi omusha. Ngalokhu engqondweni, kudingeka uqaphele ukuthi ungazithengisa kanjani. Ngenxa yalokho futhi ngokwanele, ngenxa yalesi sizathu, udinga ukufunda ukuthi ungamakethe kahle kangakanani emsebenzini. Ngokuvamile, ukufaka isicelo somsebenzi omusha kuwukuthi indlela engcono yokuphatha umsebenzi wakho. Njengoba kunikezwe la maphuzu, ukumaketha okuhle kumayelana nokuthengisa ngokwakho.
Ukukhombisa ukusungula umbiko nomqashi ongaba khona kufana nokuthola ukuhola okuthengisayo. Ngethemba lokuthi lakho ukuqondisa kukubeka njengophawu oluqinile ngokwesibonelo Emirates Airline. Ngaphansi kwalezo zimo, kufanele ushaye izimfuno zabaqashi e-UAE futhi wazi ukuthi uzithengise kanjani. Ukuze uyibeke ngokuhlukile, ngokuhamba kwesikhathi, ukufuna umsebenzi kufana ncamashi kuwo wonke umuntu ozosebenza e-Dubai City.
Ukumaketha kunezincazelo eziningi ezimangalisayo, isibonelo, ungakwazi sebenzisa umakhalekhukhwini ukuthola umsebenzi eDubai. Ungathumela imininingwane yakho njengesibonelo kumaqembu e-Linkedin noma we-Facebook. Noma ngisho nokuthumela kumawebhusayithi omqashi ukuze afinyelele abaqashi ngqo.
Kanjani kuya qaphela ukuthi kungenzeka abaqashi e-Dubai
Ngokolunye uhlangothi, uma ufuna umsebenzi wakho omuhle kakhulu we-Middle East. Kumele cabangela umsebenzi webhange e-Dubai. Ubufakazi obunamandla kunazo zonke ozoyidinga ukufakazela yimfundo yakho kanye nesipiliyoni somsebenzi. Njengoba kunikezwe la maphuzu, ingxenye enkulu, inhlanganisela enhle kakhulu yokuhlangenwe nakho iyisihluthulelo. Kuze kube sesikhathini samanje, ubuchwepheshe bakho obufanele kuyisimo esiqinile. Ukuze uthole umsebenzi okwamanje namakhono okuxhumana, unenani elikhulu.
Ngokushesha noma ngubani ofuna umsebenzi kufanele athuthukise kokuqala indawo ukubaluleka namakhono abo kumqashi ongaba khona. Ukuze uqale ukuzimaketha ngaphambi kokuhola i-career yakho udinga ukuvula amandla akho. Singa ukusiza amaNdiya aseGulf ukuthola umsebenzi. Lokho kuyiqiniso, siyithanda ukuthola i-Resume yakho uma uvela e-India. Ngakho-ke ungakwazi ukuphuma kubaqashi abangaba khona ngenkampani yethu.
Ngokuvamile, ukuze uzikhuthaze udinga ukusebenza kanzima. Dubai City Inkampani ukunikeze lamaphuzu kuwe, nakanjani, udinga ukusebenza ngamakhono athile anjengokuxoxisana, ukukhulumisana, ukubonisana kanye ne-cryptocurrency enhle kakhulu ukuthengisa. Ngaphambili onobuntu obuvelele, uzofinyelela ilitshe lakho. Ngokuqinisekile, ubamba ukunakwa komqashi okulindelekile. Ikakhulu uma unjalo sifuna umsebenzi e-UAE njengesisebenzi. Futhi uzokwazi ukufingqa ubuso nobuso no-Know Your Kufanele isikhathi.
Zithengise ngokwakho ngokusebenzisa ama-ejenti wokuqasha
Ngokushesha kufanele unikeze isipiliyoni esihle kakhulu ama-ejenti aqashwe ngokuqashelwa phezulu kanye nemisebenzi yokuthengisa e-Dubai. Into yokuqala okufanele uyikhumbule ukuthola iphakheji ephelele udinga ukuba muhle kakhulu ekukhangiseni. Njengoba kuphawuliwe isipiliyoni sakho singaguqulwa njalo futhi siphakanyiswe kusuka lapho ufika enhlokodolobha yase-United Arab Emirates. Ngakho-ke, kuze kube manje yeka ukuthungatha izindima zabaphathi abaphezulu eDubai. Abaqashi eMiddle East nase Gulf kungenye okunzima kakhulu ukukholisa.
Ahluke kakhulu kwabanye ngoba bonke bevela emlandweni wangaphandle. Ngesikhathi esifanayo, akulula ukuhambisana udinga ukuqondiswa ngokwazi kanjani.
Kufanele usebenzise WhatsApp ukuthola umsebenzi ezingeni eliphansi kuqala. Ubufakazi obucindezela kakhulu be izikhungo zokuqasha ukubuyela kwakho kuphrofayela yakho ye-Linkedin. Ngokuphawulekayo iphrofayili yakho yokuqalisa kabusha ne-Linkedin ingenye yokuvula okukhulu ongaba nakho. Ngalesi sizathu, ukuthumela i-cv kanye thengisa iphrofayela yakho kumuntu ozoba ngumqashis ingqondo engcono ongayithola.
I-Dubai Career nezindlela ezimangalisayo zokuthengisa emakethe e-UAE akunjalo kuwe?
Njengoba unikezwe la maphuzu, thola inqubo eyeqisayo ye ukuthi ungaqala kanjani ukumaketha e Dubai
Ngokusobala, qala ukuhlaziya imakethe ehlosiwe
Qonda okufihliwe kwakho imakethe yomsebenzi noma isicelo somsebenzi ngaphakathi kwezinkampani zokuqasha eDubai. Ocwaningweni lokugcina lwesicelo sakho somsebenzi. Udinga ukwenza isisekelo esiningi ngangokunokwenzeka. Ngokuvamile ukukhuluma nazo zonke izinto ezibhekwayo ngaphakathi kwemakethe okuhlosiwe. Isibonelo, ungashaya i izikhala zehhotela e Dubai. Ngakolunye uhlangothi, chaza imibono nefilosofi yenhlangano. Ngemuva kokuzama konke ukuthola ulwazi, ubuntu, ubuchwepheshe, ubuchwepheshe, kanye neziqu inkampani inenani kakhulu.
Ngokukhethekile umsebenzi wokunikeza umsebenzi ufunde incazelo yomsebenzi ngaphambi kokuthi ukhulume nomuntu ofanele. Futhi, into yokuqala okumele uyikhumbule iyincazelo ngomsebenzi kanye nenkampani ukwakha ukuphuthuma kwabo, ukuphoqelelwa, nokufunwa Imakethe yomsebenzi we-UAE. Ngokuvamile, zama ukusebenzela ukuthola ukuthi yini okudingeka yenziwe kuleyo ndima. Futhi ngokuhamba kwesikhathi, uzosenza njengesikhulu umphathi. Izoletha ukusebenza okumangazayo futhi ingene eqenjini labaphathi labaphathi abakhulu.
Kungani ukufaka uphawu lomuntu siqu kubalulekile kumhloli womsebenzi
Ngezinye izikhathi udinga ukusungula uxhumano ngenhloso yokuthola umsebenzi. Ngalokhu engqondweni nikhuphukele emphakathini nabanye abadinga ngempela umnikelo. Nakuba lokhu kungaba yiqiniso lokuqashwa kwabantu kusho ukuthola umsebenzi e-Dubai. Ngakolunye uhlangothi ukuthengisa, wena ngokwakho ngokuqeqeshwa kwakho kochwepheshe okwenziwe esikhathini esidlule. Isibonelo ukuthi isipiliyoni sakho singaba kanjani okubalulekile kumqashi ozayo e-Dubai.
Khona-ke inhlanganisela eyingqayizivele yamakhono nemfundo. Eqinisweni kanye nokuhlangenwe nakho kwakho okudlule kanye nezithakazelo zakho lapho ungasebenzisa ukuthuthukisa iphrofayela yakho kwabanye. Ingabe sebenze kahle ngokusesha kwakhog. Kumele kukhunjulwe ukuthi ngesikhathi esisodwa wonke umuntu ofuna umsebenzi uhlonishwa ngomsebenzi omusha. Kodwa ohlangothini olubi, lokho kuwumsebenzi wakho ukuvumela abaqashi bakho besikhathi esizayo ukuthi bazi mayelana nomkhiqizo wakho. Ikakhulukazi uma ukhona sifuna izithuba uma uvela ePakistan futhi ngifuna ukuhlala ku I-United Arab Emirates.
I-Dubai Career nezindlela ezimangalisayo zokuzimaketha e-UAE - Kuzokusebenzela?
Ngokuvamile, indawo enhle kakhulu yomsebenzi lapho ungathola khona imisebenzi:
LinkedIn - Yathandwa kakhulu ngokuhamba kwesikhathi kuhle ukuseshwa komsebenzi.
Angel.co - Kuhle kakhulu ukuqala okusha-ups futhi kulula ukuthola imisebenzi yezizwe ngamazwe.
Ithuba lami - Omunye wamasayithi enethiwekhi anhle kakhulu lapho ungathumela khona umbiko oqondile.
Yiqiniso, bonisa isikhathi ngelimi lakho
Enye iphuzu eliyinhloko ku ukusesha umsebenzi wakho e Dubai nase-Abu Dhabi ulimi lwephethini. Ngaphansi kwalezi zimo, lokhu kuyindlela yokuchaza ukwakheka okuhle. Inqubo evamile yokuhlelwa kwamakhono akho ingaba usizo ezinhlanganweni eziningi. Ungakhulumi ngaphakathi kwenkambu yokuthengiswa kwezobuchwepheshe ungasebenzisa ukuthola umsebenzi ongcono.
Into yokuqala okufanele uyikhumbule amagama asetshenziswayo. Ngokunaka izinzwa zezwi lapho unenhlolokhono. Njengoba kukhonjisiwe ngenhla, qonda ukuthi isho ukuthini imishwana ebalulekile embonini. Kumqashi ngamunye ngoba nabo babalulekile uma ufaka isicelo sendima entsha e-Dubai. Ngakolunye uhlangothi, ulimi oluvumayo lungakusiza ukuthi uthole a umsebenzi wamaphupho e-UAE.
Dubai Career nezindlela emangalisayo ukuzimaketha UAE it yindlela engcono kakhulu yokuqala umsebenzi omusha.
Ngenxa yalokho, amaphutha ohlelo lolimi amaphutha esipelingi
Ukwengeza besebenzisa imishwana efanelekile emikhakheni ethize efana namafutha negesi noma ukumaketha. Kwangathi kungakusiza uthole ngisho namakhono athile nokuqeqeshwa okukhokhelwa umqashi wakho wesikhathi esizayo. Ngalokhu engqondweni ungase ubheke amaphutha ohlelo lolimi, amaphutha epelingi noma imisho ephelele uma unengxoxo ebusweni ubuso nobuso. Iphutha elibi kunazo zonke ongaba nalo ukuya kuNgxoxo. Futhi-ke umqashi uzokhuluma ngephutha ku-Resume yakho. Kulesi simo, ukwethembeka kwakho kuzokwehlisa okuningi.
Dubai yiyona indawo enhle yokuhlala futhi uqale umsebenzi kepha i-CV yakho idinga ukuphelela. Akunandaba ukuthi uzoyithengisa kahle kangakanani. Uma kubhalwe kabi ukwenza isibonelo ngeke ufinyelele kunoma ngubani. Njalo lapho uthumela i-Resume. Sicela uqiniseke ukuthi uyisebenzele futhi uyenze ngesigaba esiphakeme.
Ukwakha umkhiqizo wakho futhi ubonise a kancane kancane ubuntu
Ekukhanyeni kokwakha umkhiqizo wakho ngamunye. Ungesabi ukwengeza ubuhle obuncane nokuthintana kwakho nesicelo sakho. Ngaphezu kwalokho, nakuba lokhu kungase kwenzeke ngokuhamba kwesikhathi. Kodwa application career kuya ngokuthi uqine kangakanani ukumaketha ukufeza kwakho kanye nomzamo wokusebenza. Ngokunikezwe la maphuzu, kubaluleke kakhulu ukuthi uthole ukuthi yini ekwenza wehluke kwezinye expats, ngokwesibonelo, abasebenzi baseFilipi eDaily. Ngakho-ke awukwazi ukuxhumana nomqashi ngendlela yomuntu siqu.
Ngalesi senzo ngaphandle kwezintshisekelo zakho, intshiseko, injabulo, ukuzinikela ngenjongo yephrojekthi ye-Dubai Company. Ukungasho lutho ngamakhono akho ngokubambisana kuzoba ingxenye yephakheji ephelele. Ngakho-ke, ungaxoshi ngengqondo. Ukuzithengisa ngokwakho kukukwenza ube umuntu ovelele kakhulu ngokuqashelwa ku-2018.
Yakha umkhiqizo wakho ngamunye kwi-Dubai Career ku-UAE
Ekuhlaziyweni kokugcina, i-Dubai City Company iyaqaphela indlela yokuthengisa iphrofayela yakho ngempumelelo e-Dubai. Kunoma yikuphi, Qhubeka nokuthuthukiswa komsebenzi e-UAE. Ngokushesha noma kamuva ngaphambili ukuthola umsebenzi eSaudi Arabia. Umkhiqizo wakho ubonakala kakhulu kulo mkhakha. Kuze kube sesikhathini samanje ekugcineni, uzosungula ulwazi olwakhe mayelana nokufaka uphawu ku-Dubai.
Unikezwe la maphuzu ahlale ekwaziswa okufanele futhi enolwazi oluhle yenza ube ngumcwaningi womsebenzi ongcono. Ngalesi sizathu sokutshala imboni yomhlaba. Ngenxa yalesi sizathu ucwaningo olumemezelo, imisebenzi e-Dubai blogs kanye izindawo zokungena emisebenzini e-Dubai. Enye iphuzu eliyinhloko ongayibamba liphendula futhi lifaka isandla emakethe engxenyeni e-Dubai. Ngethemba lokuthi lizobe selikulungele futhi likudlulisele phambili endaweni yokuxoxa ngesikhathi esithile. Ngakho ukubeka ngenye indlela thina ngokuqinisekile sikubonisa ukuthi ungazithengisa kanjani ngempumelelo phezu kwe-United Arab Emirates.
I-Dubai Career nezindlela ezinhle zokuzimaketha e-UAE - Zama ukwakha njalo brand yakho e Dubai.
Ukuzithengisa ngempumelelo kumawebhusayithi okuxhumana nabantu
Okubaluleke kakhulu futhi indlela engcono kakhulu yokuzimaketha yimidiya yezenhlalo. Kuze kube manje, izingosi zokuxhumana yizo eziguqula abashintshi bomdlalo abahamba phambili. Ngokuvamile, bakwenze kwaba lula kunokwejwayelekile uzakhele umsebenzi we-Emirates e-UAE. Ukuxhumana nokuxhumana nabantu kukusiza wenze othintana nabo futhi uthuthukise umsebenzi wakho. Ngezikhathi ezithile amasayithi afana ne-LinkedIn, i-Angel.co, ne Bayt.com kukusiza ukufinyelela abaqashi abaqondile eMpumalanga Ephakathi.
Ngokuyinhloko, indlela efinyeleleka yokuxhumana phakathi kwe-intercommunication kuzokusiza ukuphatha umsebenzi wakho. Njengoba kuye kwaphawulwa kuze kube manje ukuthola umsebenzi eDubai ngokusebenzisa izingosi zenethiwekhi kukusiza ukuletha ukukhanyisela izinketho ezintsha zomsebenzi. Empeleni, inqobo nje uma wena Layisha kabusha ngoba Imisebenzi yase Dubai izikhala zenkampani yethu. Ngokuqhathaniswa, khulisa ukucinga kwakho komsebenzi noma ukuqasha okungenzeka kanye nokufaneleka.
Enye yepumelelo kakhulu Abazobhalwa emisebenzini eDubai bangabantu baseNingizimu Afrika. Phakathi kwabanye babe nemfundo enhle. Okunye okuhlangenwe nakho okuhle kakhulu kusuka ezinkampanini ezinkulu eziseseMpumalanga Ephakathi naseNingizimu Afrika.
I-Dubai Career nezindlela ezimangalisayo zokuzimaketha e-UAE - Ingabe kuwe?
I-Dubai Career ne-WhatsApp Group marketing
Empeleni, uma ufuna umsebenzi. Kufanele ucabange ngathi Amaqembu we-WhatsApp wokuthuthukisa i-CV yakho e-Dubai. Njengoba sinikeziwe la maphuzu, ithimba lethu lokuphatha lidale amaqembu amaningana ukuze asize abanye bathole abaqashi e-Dubai. Kumele ucabange ngokuqhubeka kwakho ukuze uthole umsebenzi omuhle. Lokhu kubaluleke nakakhulu uma uzimisele ukuthengisa iminingwane yakho hhayi kuphela e-Dubai kodwa naseMpumalanga Ephakathi.
Inkampani Dubai City Inkampani elawula ama-akhawunti omphakathi e-Middle East Amaqembu we-WhatsApp ngenhloso yokusiza abanye. Noma yimaphi Amaqembu e-WhatsApp amahhala futhi kufanele abe ngale ndlela ngaso sonke isikhathi. Ngoba wonke umuntu ofuna umsebenzi kufanele abe nethuba lokuxhumana nabaqashi phezu umakhala ekhukhwini. Ngeke kulunge ngokwanele uma ukhetho olusha lwesikhundla olungehluleka. Ngaphansi kwezeluleko nezeluleko zethu, kufanele futhi ubheke izinkampani eziqashayo.
Ther unayo I-Careerjet International injini yokusesha umsebenzi futhi Iwebhusayithi yokuqasha iGulf. Bonke bakulungele ukuthatha i-CV yakho. Futhi ngokuqinisekile ngempela kufanele usebenzise isicelo sakho somsebenzi.
Izikhundla zomsebenzi wangaphandle kanye nokumaketha
Ukuze ukuthola umsebenzi womhlaba wonke kanye nezithuba zomsebenzi wangaphandle. Ukuthatha isikhathi nokuthengisa akuyona into esemqoka. Udinga ukuba nokuxhumana nokuhlangenwe nakho esandleni. Ngaphezu kwakho konke, empeleni, kudingeka ube nezitifiketi ezinhle ku-UAE. Isibonelo, isipiliyoni sakho esivela ezweni lakubo kungenzeka ukuthi cha okwanele ukufakwa Dubai. Amanye amacala uzodinga ukucinga imisebenzi yokuqala ku-UAE.
Ukuqala umsebenzi kuGulf kufanelekile hlola ukuthengisa nezithuba zokumaketha umhlahlandlela. Iningi labaphathi liphenya ngemisebenzi yasendaweni. Kodwa ngemuva kwayo yonke indlela smart ukufuna umsebenzi emhlabeni wonke emikhakheni yezentengiso. I-MiddleEast igcwele izinketho zawo wonke umuntu omusha. Ikakhulu ngoba Indian futhi I-Pakistani izisebenzi. Kepha uma uke wavakashela eDubai kufanele ukubone lokho.
Kukhona iningi lemisebenzi elula, isibonelo, izikhundla ze-telesales emazweni aseGulf njengeQatar noma i-Kuwait. Lolu hlobo Umsebenzi uhle e-UAE.
Isifinyezo seseluleko somsebenzi wase Dubai
Ukunikezwa lokhu ngamaphuzu ngokuzithengisa ngokwakho. Ukukhomba ukuthi udinga ukuqala nje ukulayisha ukuqhubeka emsebenzini kumasayithi e-UAE njenge-expat. Futhi engxenyeni engalungile, indlela engcono kakhulu yokuzithengisa ngokwakho ukubiza okubandayo kwemisebenzi yezithuba. Kuthiwani unomlando omangalisayo wezemisebenzi futhi uyifaka emakethe yomsebenzi wase-Dubai.
Ngakho-ke indlela yakho yokumaketha iyobe ifana nje nenqubo. Ngakho, ngaphansi kwalezi zimo, thatha isikhathi sokuqonda. Ubuningi bobuchwepheshe, uhlelo lokuhlakanipha nolwazi lwe-inthanethi oluzofunwa ngumqashi wakho wesikhathi esizayo ukukuqasha esikhundleni se-Dubai. Iphuzu elivame ukushiywa indiva ngabaxhumanisi bezochwepheshe ungasebenzisa inkampani yethu futhi wenze izinto kuqala.
Enye yezindlela ezinhle ukuthola umsebenzi ngokuba nemfundo ye-MBA. Lokho kungakusiza kakhulu kwiDubai Career nezindlela ezimangalisayo zokuzithengisa e-UAE.
Dubai Career nezindlela ezimangalisayo zokuzithengisa ku-UAE
Ukuphatha wena, iseluleko sokufuna umsebenzi, nezindlela zokukhuthaza eMiddle East.